Chelmo - ရင်သားကင်ဆာ ကာကွယ်ရန်
ဘယ်တော့ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ကြိုတင်ပြီးတော့လည်း မသိနိုင်ပါ။
အားကစား၊ အစားအသောက်၊ နေ့စဉ်နေထိုင်မှုဘဝ၊ ဘာရယ်လို့မဟုတ်ပဲ နည်းနည်းချင်းလုပ်ဆောင်နေတဲ့ အကျင့်တစ်ခုက ရင်သားကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် ပုံမှန် ဆေးစစ်ဆေးမှုက လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပင်မဲ့လည်း နေ့စဉ် စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေလည်းရှိတာကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
၀၁. ရင်သားကို နှိပ်ပေးပါ။
ချိုင်းအောက်မှစ၍ ရင်သားဘေးကို စတင်ပြီး နှိပ်သင့်ပြီး ရင်သားအောက်ပိုင်း၊ ရင်သားထိပ်အထိရောက်အောင် နှိပ်ရပါမည်။ ထိုသို့ နှိပ်ခြင်းဖြင့် အကြိတ်များ၏ လှုပ်ရှားမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး ရင်သားအတွင်း သွေးလည်ပင်မှုကိုလည်း ကောင်းမွန်စေမှာပါ။
တရားထိုင်တာဟာ ကင်ဆာကအစ ရောဂါအတော်များများကို မဖြစ်ခင်က ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် ရောဂါဖြစ်နှုန်းက လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
၀၃. နေ့စဉ် အချိန်အနည်းငယ်ပေး၍ အားကစားလုပ်ပါ။
နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ခန္ဒာကိုယ်အတွင်းမှ အညစ်အကြေးများကို စွန့်ထုတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုအညစ်အကြေးများကို စွန့်ထုတ်ရန်အတွက် အကြိတ်များ၏ လှုပ်ရှားမှုကောင်းရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအတွက်ကတော့ ခန္ဒာကိုယ်လှုပ်ရှားမှု အားကစား လိုအပ်ပါတယ်။ အားကစား လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခြင်းအားဖြင့် လိုအပ်သော ဟော်မုန်းဓါတ်များကို ထုတ်လုပ်နိုင်စေပြီး ကင်ဆာအတွက်လည်း ကာကွယ်ရန် နည်းလမ်းကောင်း တစ်ခုဖြစ်မှာပါ။ နောက်တချက်ကတော့ အားကစားကြောင့် လှပတဲ့ ခန္ဒာကိုယ်လေးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်စေမှာပါ။
၀၄. ချွေးများများထွက်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး အားကစာလုပ်ပါ။
အားကစားလုပ်တာကိုလည်း သာမန်ထက်စာလျှင် ပိုမိုလှုပ်ရှားခြင်းအားဖြင့် ချွေးများများထွက်စေပြီး ကိုယ်ခန္ဒာအတွင်းမှာ အညစ်အကြေးများကို ပိုမိုစွန့်ပစ်နိုင်သလို၊ ကိုယ်ခံစွမ်းအားလည်း မြင့်တက်လာစေမှာပါ။
ကိုယ်အတွင်းမှ ဆဲလ်များဟာ ရေကို အစာအဖြစ်လိုအပ်နေတာပါ။ ကိုယ်ခန္ဒာအတွက်လိုအပ်သော ဗီတာမင်ဓါတ်၊ အစရှိသည့်ဓါတ်များဟာ နေ့စဉ်လိုအပ်လျက်ရှိပြီး ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။
၀၆. အလှကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်း သဘာဝပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်သုံးပါ။
အိမ်၊ အလုပ်မှာ ဓါတုဗေဒပစ္စည်းအများအပြားက ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ် မျက်နှာတွင်လိမ်းသော ပစ္စည်းများကို ဖြစ်နိုင်ရင် သဘာဝ အလှကုန်များကိုသာ သုံးသင့်ပါတယ်။
၀၇. သဘာဝ သန့်ရှင်း လတ်ဆပ်သော အစားအစာများကို စားသုံးပါ။
အလှကုန်ပစ္စည်းများသာမက သန့်ရှင်းလတ်ဆပ်သော အစားအစာ၊ သဘာဝထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ပြီး စားသုံးသင့်ပါတယ်။